Sida loo furo dukaan online ah si ay wax walba u shaqeeyaan
Bogga horeBarnaamijyo waxbarasho Ganacsi
Go'aanso waxa aad iibinayso
Dukaanka onlineku waa qalab kaliya. Aad ayey uga muhiimsan tahay sida aad u iibin doonto, laakiin waa maxay. U ogolow inay noqoto goobta ugu habboon iyo bixinta ugu fiican, laakiin haddii alaabtaada aysan u baahnayn dadku, ganacsigu wuu guban doonaa. Markaa waxaad u baahan tahay inaad bilowdo inaad fikrad raadiso.
Haddii aad wax soo saarayso, sida cad qodobkani wuu kuu fududaan doonaa. Haddii aad doonayso inaad dib u iibiso alaabta, waa inaad si qotodheer u baadho tartamayaasha suurtogalka ah. Waa guul weyn in la helo meel bilaash ah, laakiin tobankii sano ee saddexaad ee qarniga 21aad ma fududa in tan la sameeyo. Sidaa darteed, waxaad u baahan doontaa inaad waqti badan ku bixiso si aad u fahamto sida aad uga soo bixi karto asxaabtaada. Tusaale ahaan, soo jeedi:
noocyo kala duwan oo badeecooyin ah, haddii ay jirto fursad lagu helo wax kasta oo hal nidaam ah, dadku waxay ku faraxsan yihiin inay isticmaalaan;
si degdeg ah iyo / ama ka badan oo ku habboon gaarsiinta;
nidaamka soo celinta habboon;
Ilaa inta aad ka buuxinayso dhammaan godadka qaybta aragtida, dib u dhig u gudubka ficilka.
Haddii ay dhab kaa tahay, waa inaad sharciyeysaa. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa hal-abuure ganacsi ama LLC. Iyadoo aanad waxba iibinayn, balse aad is diyaarinayso, maamulka cashuuruhu uma badna inay ku daneeyaan. Laakiin iyada maaha. Waxaad u baahan tahay xaalad rasmi ah hadda si aad iskaashi ula samayso shirkadaha aad la geli doonto qandaraasyada, alaab-qeybiyeyaasha, qandaraaslayaasha, iyo wixii la mid ah.
Soo hel alaab-qeybiyeyaal
Haddii aadan adigu samayn sheyga, waa inaad meel ka soo qaadaa. Markaa waa inaad la macaamishaa alaab-qeybiyeyaasha. Si aan lacag badan loogu bixin dhexdhexaadinta oo loo yareeyo khatarta ah in lagu tuuro, waxaa fiican inaad la xiriirto soo saaraha ama qaybiyaha rasmiga ah.
Laakiin tani mar walba suurtagal maaha sababtoo ah mugga wax iibsiga. Tusaale ahaan, haddii warshad kaliya ay rarto 1,000 shay ama ka badan, oo aad u baahan tahay 10 xabbo, ma jirto wax micno ah oo aad si toos ah kuugu soo gabagabeyn karto qandaraas. Waa inaan raadinaa dhexdhexaadiye
Uma baahna inuu soo jiito macaamiisha: si kastaba way u iman doonaan, markaa kuuma fududayn doono inaad ku baadho goobo dareen leh iyo xayaysiisyo xariif ah. Ama waxay noqon doontaa, sida nasiibku u yeelan lahaa. Laakin u diyaar garow inaad wakhti badan ku qaadato internetka, samaynta telefoonada, iyo xataa akhrinta calaamadaha alaabta ee xidhiidhka.
Marxaladdan, waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto hal shay oo kale, haddii aad rabto inaad habayso bakhaarkaaga kaydinta ama u dhaqmo kaliya dhexdhexaad ka dhexeeya alaab-qeybiyaha iyo iibsadaha. Doorashada labaad sidoo kale waa suurtogal waxaana loo yaqaan dropshipping. Adiga ayaa la wareegaya dalacsiinta alaabta, qaybiyahana waxa uu ka keenaa bakhaaradooda.
Labada ikhtiyaarba way shaqeeyaan, kaliya waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso midka kugu habboon.
Dooro qaabka dukaanka onlaynka ah
Kala duwanaansho yar, waxaad ku xaddidi kartaa naftaada shabakadaha bulshada ee sida wanaagsan loo qaabeeyey iyo akoonnada Instagram-ka. Haddii aad weli u baahan tahay shabakad, si habboon uga fikir qaab-dhismeedkiisa oo ka dhig mid ku habboon oo la fahmi karo macaamiisha. Ugu yaraan, waxaad u baahan doontaa:
Bogga ugu weyn ayaa ah waxa ugu horreeya ee uu qofku arko marka uu goobta tago. Waa inay ahaataa mid soo jiidasho leh oo ka dhigaysa booqdaha halkan yimid markii ugu horeysay inuu ku sii joogo. Waxa ugu weyni waa in macmiilka suurtagalka ah uu isla markiiba fahmo meesha uu joogo iyo waxa aad halkan ku samaynayso.
Buug-gacmeedka , qaybta alaabada oo dhan leh. La imow nidaam shaandhayn ku habboon, tijaabi ilaa aad ka gaadhayso mid kaamil ah. Hagaha hagaha waa inuu ahaadaa mid fudud oo toosan.
Bogga badeecada ayaa lama huraan u ah alaab kasta oo aad iibiso. Macmiilku waa inuu awood u leeyahay inuu ka eego alaabta dhinac kasta, akhriyo sifooyinka iyo sharraxaadda loo baahan yahay.
Raadi bogga , hagaaji si booqdeyaashu u helaan waxay raadinayaan. Ha iloobin shaandhada iyo kala-soocidda natiijooyinka iyadoo loo eegayo shuruudo kala duwan.
Cart , bog muujinaya in macaamiishu iibsanayo. Samee si aad halkaas uga tagi karto bog kasta.
Xaaladaha shaqada , macluumaadka ku saabsan bixinta, soo celinta, xiriirka waa in si fudud loo heli karo, gaar ahaan haddii ay jirto in faa'iidooyinkaaga ay qarsoon yihiin.
Waxaad samayn kartaa degel internet ah oo ka mid ah adeegga wax-dhisaha, ama aad qof ka bixi karto, waxaad ka dalban kartaa abuuritaanka bogag xoqan, ama waxaad iibsan kartaa dukaan online ah oo diyaarsan.
Ku bilow miisaaniyadaada iyo caqligaaga fayow. Tusaale ahaan, mar walba laguma talinayo in la sameeyo shay cusub, haddii aad isticmaali karto dhisaha, ka dibna, adoo kaashanaya barnaamijka, dhammee boggaga ku habboon baahiyahaaga.
Qaado sawirada alaabta
Sawir qaadista buug-yaraha, waxaad u baahan tahay asal cad, iftiin wanaagsan, iyo gacmaha ka soo baxaya garbahaaga. Haddii aad waxaas oo dhan leedahay, waxaad ku heli kartaa dhiig yar.
Alaabooyinka qaarkood waxay u baahan karaan qaabaynta. Tusaale ahaan, waxaad iibinaysaa goonno maqaar ah oo gooyo aan caadi ahayn. Waxay noqon doontaa mid aad u cad oo soo jiidasho leh haddii aad ku ururiso sawirro dhowr ah oo aad ku muujiso qaabka.
Oo halkan waxaa laga yaabaa inaad u baahato adeegyada ma aha oo kaliya sawir qaade xirfad leh, laakiin sidoo kale farshaxan-qurxin, timo-jaraha, stylist. Asal ahaan, dib ugu noqo miisaaniyada iyo caqli-galnimada.
Diiwaangeli magac domain
Ma jiraan wax la yaab leh halkan: magaca domain waa inuu ahaadaa mid sahlan in la xasuusto, si caddaalad ah oo fudud oo gaaban, oo leh kordhin cad. Aynu nidhaahno pudra.ru aad ayuu uga fiican yahay kosmetikaikisti.narod.hn.
Deji habka lacag bixinta
Si aad u aqbasho lacag bixinta, waxaad u baahan tahay jeeg online ah oo lagu dhex dari karo goobta CMS. Caawinteeda, waxaad macaamiisha u soo diri doontaa rasiidhada elektaroonigga ah oo xaqiijin doona iibsashada. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad ku xidho nidaamka lacag-bixinta si ay macaamiishu kuugu soo xawilaan lacag. Hadda waxaa jira xalal habboon oo diyaarsan oo diyaarsan, taas oo ay ugu mahadcelinayaan taas oo ay suurtogal tahay oo kaliya in lagu dhejiyo foomka lacag-bixinta bogga bogga internetka, laakiin sidoo kale in la soo saaro qaan-sheegyo leh xiriir lagu soo diro boostada ama farriinta.
Saxeex heshiisyada adeegyada keenista
Dooro shirkado sumcad leh. Haddii alaabtu soo daahdo ama xaaladdeedu liidato, waxaad weli ahaan doontaa kan ugu dambeeya.
Kor u qaad dukaankaaga onlaynka ah
Si kasta oo aad u samaysay talaabooyinkii hore, qofna ma ogaan doono guulahaaga xayaysiis la'aan. Waa inaad ka fikirtaa istaraatijiyad suuq-geyneed xitaa marxaladda fikradda abuurista. Tallaabooyinka loo baahan yahay waxay ku xirnaan doonaan badeecadaada iyo dhageystayaasha bartilmaameedka u ah.
Adeegso awoodda warbaahinta bulshada oo ku xayaysii dukaankaaga onlaynka ah halkaas. Ka dalbo xayeysiisyada saameeyayaasha Kor u qaad goobta raadinta ereyada muhiimka ah. Ku xidh ololaha iimaylka Ku sasab macaamiisha xayaysiis iyo qiimo dhimis. Samee wax walba si ay dadku adiga kuu ogaadaan.
Horumari dukaankaaga onlaynka ah
Uma badna in ay suurtogal tahay in wax walba la sameeyo isla markiiba si aan isbeddel loogu baahnayn. Waxaa horyaala shaqo badan oo lagu hagaajinayo goobta ay dhibaatooyinka ka soo bixi doonaan. Dhegayso talada, tilmaanta, iyo gaar ahaan faallooyinka xanaaqa. Iyo sidoo kale si joogto ah u falanqee dhammaan xogta si aad u fahamto meelaha daciifka ah iyo waxa ay macaamiishu kaa rabaan.
Dukaanka onlineku waa ganacsi. Fikrad shaqo ayaa ugu muhiimsan. Marka ay sheegaan in samaynta dukaanka internetka ay fududahay, waxay ula jeedaan qaybta farsamada ee su'aasha. Runtiina sidaas uma adka. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan si toos ah u tagin abuurista dukaanka internetka, ka feker wax kasta oo aad ka fekereyso.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida loo furo dukaan online ah si ay wax walba u shaqeeyaan!